Maxkamada Ciidamada QS ayaa xukun dil ah ku riday askari kufsi u geystay gabar afar jir ah… – Hagaag.com
Maxkamada Ciidamada QS ayaa xukun dil ah ku riday askari kufsi u geystay gabar afar jir ah…
Maxkamada Ciidamada Qalabka Sidda ee Soomaaliya ayaa xukun dil ah ku riday Dable Xoogga Dalka Maxamed Xuseen Cilmi oo loo haystay inuu kufsi uu u gaystay Farxiyo Cabdi Shakuur Bootaan oo Afar jir ah.
Kufsigaan ayaa 14-kii May ee Sanadkan ka dhacay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir.
Xafiiska Xeer ilaalinta Ciidamada Qalabka Sidda ayaa baaritaan kadib waxay eedeesanaha hor geeyeen Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sidda, waxaana xukumanuhu qirtay dambiga uu galay.
Eedeysanaha oo fursad loo siiyay fadhigan Maxkamadeed ayaa sheegay inuu isaga qaadanayo mas’uulliyadda dhibkii dhacay laakiin uusan ka jawaabi Karin sababta ku kaliftay inuu kufsado gabar ciyaal ah oo ay daris yihiin, waxa uu intaasi ku daray in xilli dambe oo wax walba ay dhaceen ay dib kala xumaatay.
Muumin Xuseen Cadullaahi ku xigeenka Xeer ilaaliyaha guud ee Ciidamada Qalabka Sidda ayaa sheegay xukunka maanta lagu riday askariga uu fariin u noqonayo in fal dambe oo kufsi ah uusan ku fikirin qof kamid ah Ciidamada Qalabka Sidda.